Ugaas Xasan “Waxaan ka xummahay inuu Afey kala garan waayo Islii iyo Hiiraan..” (DHAGEYSO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ugaas Xasan “Waxaan ka xummahay inuu Afey kala garan waayo Islii iyo Hiiraan..” (DHAGEYSO)
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa si kulul uga soo horjeestay hadalkii dhawaan kasoo yeeray wakiilka IGAD ee arimaha Soomaaliya Danjire Maxamed Cabdi Afey, kaasi oo ahaa in maalinta Sabtida ah Odayaasha reer Hiiraan iyo kuwa Sh/dhexe ay isugu yimaadaan magaalada Jowhar, si ay uga wada hadlaan wixii ay tabanayaan.
Odayaasha Hiiraan ee uu hogaaminaayo Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo maanta shir ku yeeshay magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku baaqay in la joojiyo arrimaha shirka maamulka u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, kaas oo ay ku sheegeen inay keeni doonaan xiisad dagaal.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo hadal ka jeediyay shirka ay maanta odayaasha reer Hiiraan ku yeesheen magaalada B/weyne ayaa sheegay in shirka Jowhar aanu socon doonin, islamarkaana mas’uuliyadda shirkaasi ay yeelan doonto urur goboleedka IGAD, isagoo intaas ku daray in IGAD ay dooneyso in dagaal qabiil ay dib usoo nooleyso.
“Waxaa hadalkii Maxamed Cabdi Afey ku jiray inaan loo baahneyn looma dhama, waxaan ka xummahay inuu Afey kala garan waayo Islii iyo Hiiraan, wuxuuna rabaa inuu dagaal qabiil dib usoo nooleeyo, beesha caalamkana waxaa uga digaa inaysan wax qarash ah ku bixin dhibaatada laga maleegayo Jowhar” Sidaas waxaa yiri Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa imaanaya xilli maalintii shir ay maalintii shalay magaalada Muqdisho ku yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD kaga dhawaaqeen in shirka Jowhar ee maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe dib loo furi doono 3-da bishaan aynu ku jirno oo ku beegan maalinta sabtida ah ee fooda inagu soo haysa.